Isa chero hunhu hweUbuntu pane Raspberry Pi | Linux Vakapindwa muropa
Isa chero hunhu hweUbuntu pane Raspberry Pi
Kuzivikanwa kwemaminicomputer uye kunyanya iyo Raspberry Pi inoramba ichikura. Makore mashoma apfuura chaive chiroto kugona kuisa Ubuntu uye mamwe masisitimu pane diki diki yakadaro. Nhasi ichokwadi nekuda kweiyo Ubuntu Pi Flavor Maker application, iyo inokutendera iwe gadza angangoita ese "flavour" kana shanduro dzeUbuntu pane Raspberry Pi nenzira iri nyore uye inokurumidza.
Parizvino, iyi vhezheni inowirirana chete ne Raspberry Pi 2(iyo yekutanga Rasp uye iyo Raspberry Pi Zero inoita kunge isine simba zvakakwana). Kushanda kwayo kune Chinyorwa chinoita kuti angangoita ese mavhezheni eUbuntu anoenderana neakavakirwa eiyi minicomputer.
Uye zvakare, izvi zvinoshandiswa zvinokutendera kuti ushande neyakajairika Ubuntu package installers (apt, dpkg) uye uve ne zvakafanana ne desktop Ubuntu(iine processor iripachena uye nemipimo ye RAM zvechokwadi).
Zvakare, iyo yekushandisa sisitimu iwe yaunoisa inoenderana ne ese Raspberry Pi Hardware uye kuti iwe unoisa mune chero emachiteshi uye ekuwedzera mapini ane (GPIO, SPI, I2C ...) iyo inogara iri chinhu chakanaka kuratidza.
Nekudaro, parizvino hazviwirirane nekuvandudzwa kwekuparadzira kana neUbuntu's Snappy tekinoroji, zvinoitika. nekuda kwekukanganisa kwe Hardware Komputa imwe-yebhodhi KDE Plasma, Gnome kana Unity desktops haishande pamwe nekuda kwekukanganisa kuri pachena.
Ichi chirongwa chakazvarwa se mhando ye "spin-off" kuUbuntu Mate yeRaspberry Pi, nechinangwa chekuti vashandisi vagone kunakidzwa nezvose zvinwiwa zveUbuntu pabhodhi ravo. Ivo vanoita zvese izvi zvichibva pane yakakurumbira Ubuntu yeARM.
Ichokwadi ndechekuti zvinoita senge kwandiri chirongwa chakanaka kubva kumarekodhi madiki senge Xfce kana Lxde yakakwana kune yakaderera zviwanikwa zveiyo Raspberry Pi. Mamwe desktops ane simba anogona kuwanikwa mune iri kuuya Raspberry Pi shanduro rimwe zuva.
Kuti utore pasi, tichaenda kune iro repamutemo peji re Ubuntu Pi Flavour Muiti matinogona kusarudza iyo ISO mufananidzo weUbuntu flavour yatinoda gadza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Isa chero hunhu hweUbuntu pane Raspberry Pi
12 fungidziro nezveramangwana reLinux muna 2016
Maitiro ekugonesa zvisina kunyorwa kuwedzeredzwa muFirefox 43